U-Arduino Yún, ibhodi lokufaka i-Intanethi Yezinto ngokukhululeka | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
U-Arduino Yún, ibhodi lokungena kwi-Intanethi Yezinto ngokukhululeka
I-Intanethi Yezinto noma eyaziwa nangokuthi i-IoT iguqule umhlaba wezobuchwepheshe futhi isifinyelele namaphrojekthi ethu amaningi (noma ngabe siyafuna noma cha). Kungakho abasebenzisi abaningi befuna ibhodi elicubungula izinhlelo zabo, ezingabizi futhi ezixhumeka kwi-Intanethi ngaphandle kokusebenzisa ukhiye ongenantambo noma ikhadi lenethiwekhi. Kwabaningi, okwakamuva kuyisilungiso esisheshayo, kepha akusho ukuthi kuyisixazululo sobuchwepheshe noma esisebenzayo.
Njengoba kunikezwe lokhu, iqembu le- Iphrojekthi ye-Arduino isungule ibhodi elibhekiswe kwi-Intanethi Yezinto. Leli bhodi libizwa nge-Arduino Yún.
1 Yini u-Arduino Yún?
2 Uyini umehluko phakathi kuka-Arduino Yún no Arduino UNO?
3 Yini i-Openwrt-Yún?
4 Ungakuthola kanjani ukumiswa kwe-Arduino Yún?
5 Yini engingayenza no-Arduino Yún?
Yini u-Arduino Yún?
U-Arduino Yún uyibhodi elivela kuphrojekthi ye-Arduino. Lokhu kusho ukuthi ukwakhiwa nokukhiqizwa kwayo kungenziwa yithina noma nganoma iyiphi inkampani futhi sikwazi ukusebenzisa ukwakheka kwayo ukudala ama-prototypes namapuleti uqobo. Endabeni ka-Arduino Yún, lesi sakamuva kungaba esinye isinyathelo, ngoba sisekelwe ku-Arduino Leonardo, imodeli yebhodi enamandla kakhulu kune Arduino UNO.
U-Arduino Yún unomklamo ofanayo futhi isilawuli esifanayo no-Arduino Leonardo, okungukuthi, iprosesa I-Atmel ATmega32U4. Kepha, ngokungafani no-Arduino Leonardo, U-Arduino Yún unebhodi elincane le-Atheros Wireless AR9331, isikhala samakhadi we-microsd nomgogodla obizwa ngeLinino.
Uyini umehluko phakathi kuka-Arduino Yún no Arduino UNO?
Uma ucabangela okungenhla, umehluko phakathi kwemodeli ye-Arduino Yún nemodeli ucacile Arduino UNO. Kepha kukhona okunye.
Uma ubheka i-athikili esisanda kuyishicilela, ibhodi le-Arduino liswele izinto eziningi amanye amabhodi afana ne-Raspberry Pi anazo, kepha u-Arduino Yún akanawo.
Umnyombo obizwa ngeLininus ungumgogodla onikeza amandla anele uku abe nokusatshalaliswa okuncane okubizwa nge-Openwrt-Yún. Lokhu kusatshalaliswa kusebenzisa i-kernel ye-Linux namanye amathuluzi ambalwa enza i-Openwrt ingafakwa kunoma iyiphi idivayisi enebhodi le-atheros noma efanayo.
Okwamanje, kulula ukuma kancane mayelana nokuthi yini i-Openwrt-Yún nokuthi kungani kubalulekile.
I-OpenWRT Ukusatshalaliswa kwe-Gnu / Linux okuvumelana nanoma iyiphi i-router nekhadi elingenantambo. Esimweni esinjalo, I-Openwrt-Yun ukusatshalaliswa okuguquliwe okufanele kufakwe ku-Arduino Yún. Ukusatshalaliswa kuhlala eLinino futhi kunganwetshwa ngenxa yesikhala samakhadi we-microsd. Ukuze sikwazi ukusebenzisa le misebenzi, kufanele sixhumane nebhodi ukude nge-ssh futhi sisebenzise umphathi wephakheji lokusabalalisa kanye namanye amathuluzi.
Akunasidingo sokusho, lokhu kusatshalaliswa izosinikeza ngemisebenzi eyisisekelo ehlakaniphile enesistimu yokusebenza kodwa engafani nebhodi le-Raspberry Pi engasetshenziswa njengekhompyutha encane noma i-pc endala esingayisebenzisa njengeseva noma ingxenye yeqoqo.
Ungakuthola kanjani ukumiswa kwe-Arduino Yún?
Ukufinyelela ekucushweni kwe-Arduino Yún, kufanele sicabangele izinyathelo ezimbili:
Faka abashayeli ukuze yaziwe yi-pc ene-Arduino IDE
Lungiselela i-interface ekude yokuxhuma kanye nesinyathelo se- “bridge” sezinhlelo zomuntu siqu zokusebenzisa i-wireless interface.
Isinyathelo sokuqala sibalulekile ngoba kwesinye isikhathi sizodinga ukuthumela izinhlelo nedatha ebhodini le-Arduino Yún. Ukuze lokhu kufanele sikwenze kuphela faka abashayeli bebhodi bese usebenzisa i-Arduino IDE. Uma sine-Arduino IDE ku-Gnu / Linux, ngeke kube nankinga ngalesi sinyathelo futhi ngeke kudingeke senze lutho; Uma sine-Windows, abashayeli bale modeli kanye namanye amamodeli we-Arduino bazobe befakiwe nge-Arduino IDE, yingakho kubalulekile ukusebenzisa le IDE; Futhi uma sine-mac OS, akudingeki senze noma yini uma sisebenzisa i-Arduino IDE, kepha okokuqala lapho sixhuma ibhodi ye-Arduino Yún kwi-Mac yethu, iwizadi yokufaka ikhibhodi izovela, iwizadi okuzofanele siyivale ngenkinobho ebomvu. Kuyinkinga ebonakala ibonakala ku- iwebhusayithi esemthethweni ye-Arduino Yún.
Esinye isinyathelo esifisa ukusazi ukuxhumana nokuphathwa kwemodyuli ye-Arduino Yún Wi-Fi. Okokuqala kufanele sinikeze amandla epuletini; lokhu kuzodala ukuthi ibhodi lenze inethiwekhi ye-wifi ebizwa ngeYún. Sixhuma kule nethiwekhi naku- isiphequluli sibhala ikheli http: //arduino.local Leli kheli lizovula iwebhusayithi lapho singaphatha khona inethiwekhi entsha eyakhiwe. Igama lomsebenzisi nephasiwedi yaleli phaneli ngu "arduino", igama esingaliguqula uma sesingene kuphaneli.
Kepha, uma sisebenzisa i-Arduino Yun, esizokufuna ukuxhuma kunethiwekhi ye-Wi-Fi hhayi ukudala inethiwekhi yethu. Ukwenza lokhu, kuphaneli evuliwe, ezansi kukhona okwehliswayo okunezakhi zokuxhuma kunoma iyiphi inethiwekhi ye-Wi-Fi, ngaphandle kwamanethiwekhi eyunivesithi namanye amanethiwekhi afanayo asebenzisa izivumelwano nezinhlelo ze-password kwenze kube nzima (namanje) ukuxhumana nalolu hlobo lwamapuleti.
Yebo, sesivele siyazi ukuthi singayakha kanjani inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi, ukuxhuma kwenye inethiwekhi ye-Wi-Fi, kepha ngikusebenzisa kanjani lokhu kuxhumana namanye amabhodi kanye / noma izinhlelo?
Kahle ngayo kufanele sisebenzise umsebenzi weBridge ngaphakathi kohlelo esilwakha ku-Arduino IDE. Umsebenzi uqala nge I-Bridge.begin (), umsebenzi ozosivumela ukuxhumana nomsebenzi ojwayelekile nomsebenzi ongenantambo webhodi le-Arduino Yún.
Yini engingayenza no-Arduino Yún?
Ngohlelo oludingekayo, singenza noma iyiphi idivayisi yezobuchwepheshe "ihlakaniphe" sibonga ebhodini le-Arduino Yún. Noma kunjalo, okuvame kakhulu ukusebenzisa ibhodi ukuze igajethi eyakhiwe ikwazi ukuxhuma kwi-Intanethi futhi ukwazi ukuyisebenzisa ngenye idivayisi njenge-smartphone, ithebhulethi noma i-pc.
Abanye abasebenzisi bakwazile ukusebenzisa ibhodi njengekhadi lenethiwekhi elingandile, kepha kufanele sisho ukuthi ukwenza lokhu kunzima impela futhi intengo yebhodi iphezulu kunanoma iliphi ikhadi lenethiwekhi elijwayelekile. Vuliwe Okuhlelekile ungathola umlandeli omncane walokho okungenziwa no-Arduino Yún. Kumele sibhale igama lebhodi kwinjini yokusesha yokugcina futhi amaphrojekthi ahlukahlukene asebenzisa le modeli azovela.
I-Arduino Yún ibhodi elithakazelisayo nelibalulekile kubasebenzisi abaningi ngoba kuze kufike yena, noma ngubani owayefuna ukuxhuma iphrojekthi yakhe kwi-Intanethi kwakudingeka athenge ibhodi le-Arduino kanye nesihlangu esingenantambo noma se-GSM esivumela ukuxhumeka. Izindleko zaziphakeme kune-Arduino Yún kanye nezinhlelo ezinzima kakhulu ezinokulinganiselwa okuningi. U-Arduino Yún ulungisa konke lokhu futhi unikeza ithuba lokudala amagajethi alula futhi anamandla kakhulu kunamanje. Kepha iphrojekthi yethu ingahle ilungele ezinye izindlela ezifana ne-Raspberry Pi Zero W. Kunoma ikuphi, bobabili i-Arduino ne-Raspberry Pi balandela imihlahlandlela ye-Free Hardware futhi lokho kusho ukuthi singakhetha ibhodi nesisombululo ngaphandle kokubona iphrojekthi yethu isengozini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » U-Arduino Yún, ibhodi lokungena kwi-Intanethi Yezinto ngokukhululeka
Sawubona, Ephreli 24, 2018, leli cwecwe libonakala lihoxisiwe ngumkhiqizi, ngoba kuthiwa alihambisani nanoma yimiphi imithethonqubo.
Okungicasulile ukuthi isihlangu sika yun sinaso kukhathalogi.
Ngishiya isixhumanisi: https://store.arduino.cc/arduino-yun
Ngifuna enye indlela yephrojekthi yami, ngingajabulela noma iziphi iziphakamiso.
Ukubingelela nokubonga ngokuthunyelwe.
Yenza ilokhi yakho kagesi ongavula ngayo umnyango wakho wegaraji ngenxa yeminwe yakho
Dala umshini wakho we-Arcade nge-Raspberry Pi